iPhone ebe nchekwa Iweghachite: Naghachi Data si iPhone Internal Kaadị ebe nchekwa r
> Resource> iPhone> iPhone Kaadị ebe nchekwa Iweghachite: Naghachi Data si iPhone Internal Kaadị ebe nchekwa
Ọ ga-agbake furu efu data si iPhone ebe nchekwa?
Ọ bụrụ na ị na-achọgharị online, i nwere ike ịhụ na nza nke data mgbake software na-ekwupụta na ha nwere ike naghachi gị furu efu data si dị iche iche ebe nchekwa kaadị mobile igwe. Na-agụ ihe nke ọma, ị ga-ahụ na kaadị ebe nchekwa bụ mgbe mpụga na kaadị ebe nchekwa, ọ bụghị esịtidem otu, karịsịa iPhone esịtidem kaadị ebe nchekwa. Ọ ga-agbake data si iPhone esịtidem kaadị ebe nchekwa? Azịza ya bụ ee. Kedu? Na-agụ na.
Olee otú ịrụ iPhone ebe nchekwa data mgbake
Nke mbụ niile, ị chọrọ iji nweta a nri iPhone ebe nchekwa mgbake software. E nwere ọtụtụ, ma e n'ezie bụ ụdị software. Ọ bụrụ na ị na-adịghị otu nhọrọ, ebe a bụ m nkwanye: Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (Mac) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (Windows). Ma nke software ekwe ka ị weghachite iPhone ebe nchekwa data site adịrị iTunes ndabere nakwa dị ka kpọmkwem ike iṅomi na-agbake data si iPhone ebe nchekwa kaadị.
Ị nwere ike nweta free ikpe version inwe a-agbalị. Unu ga-esi na otu onye gị onwe gị iOS ngwaọrụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ kpọmkwem ike iṅomi na-agbake data si iPhone (iOS 9 akwado) ebe nchekwa.
Ọzọ, ka na-agbalị Wondershare Dr.Fone maka iOS (Windows) na ego otú naghachi iPhone esịtidem kaadị ebe nchekwa data na nzọụkwụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye na Mac onye ọrụ, biko ibudata Mac version nke Wondershare Dr.Fone maka iOS (maka iOS 9) naghachi data na yiri nzọụkwụ.
Nkebi nke 1: Kpọmkwem iṅomi ma naghachi data si iPhone ebe nchekwa
Nkebi nke 2: Iṅomi ma wepụ iTunes ndabere naghachi iPhone ebe nchekwa data
Mkpa: Iji jide n'aka na gị furu efu data nwere ike ịga nke ọma natara site iPhone ebe nchekwa, ị ga mma ike anya gị iPhone na-akwụsị na-eji ya maka ihe ọ bụla gụnyere ịnabata oku, ozi, wdg ọ bụla ime ihe nwere ike overwrite gị furu efu data.
Na-agba ọsọ Dr.Fone na kọmputa gị, na jikọọ na gị iPhone. Mgbe ahụ ị ga-esi na interface n'okpuru.
Maka iji iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5C / 5S / 5 / 4S:
Maka iji iPhone 4 / 3GS: Ị chọrọ ibudata a nkwụnye na ebe a.
Nzọụkwụ 2. iṅomi gị iPhone ebe nchekwa
N'ihi na iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5C / 5S / 5 / 4S ọrụ, ị nwere ike ozugbo pịa Malite iṅomi na-amalite ịgụ isiokwu gị iPhone. Ọ bụrụ na ị bụ onye iPhone 4 / 3GS onye ọrụ, na-eso nzọụkwụ n'okpuru-esi banye scanning mode ike iṅomi gị iPhone ebe nchekwa furu efu data:
Press Ike na Home buttons na gị nwụrụ anwụ iPhone n'otu oge maka kpọmkwem 10 sekọnd. The Software ga gụọ oge maka gị.
Mgbe 10 sekọnd gafere, hapụ Ike button ozugbo, ma ịnọgide na-ejide ndị Home button ọzọ 15 sekọnd.
Mgbe ị banyere usoro, software ga-akpaghị aka iṅomi gị iPhone dị ka ndị a.
Nzọụkwụ 3. Preview & naghachi data si iPhone kaadị ebe nchekwa
Doppler ga-ewe gị a mgbe. Ị na-ekwe ka ịhụchalụ hụrụ data ebe mbụ faịlụ a hụrụ, na kwụsị Doppler mgbe ị na-ama nwetara furu efu data ị chọrọ. Mgbe ahụ akara ndị data na pịa "Naghachi" na-azọpụta ha na kọmputa gị.
Cheta na: Data dị na onye ọ bụla udi na-agụnye ndị ehichapụ-adịbeghị anya. Ị nwere ike ịlele ha site eji bọtịnụ n'elu: Naanị gosipụta ehichapụ ihe.
Mkpa: Ọ bụrụ na ị chọrọ iji naghachi iPhone ebe nchekwa data si iTunes ndabere, ị ga-mma ghara mmekọrịta gị iPhone na iTunes mgbe ị na-ehichapụ faịlụ, ma ọ bụ iTunes ndabere ga-emelitere na-aghọ otu ka nke ugbu a data na gị iPhone ebe nchekwa. Ị ga-efu ndị gara aga data ruo mgbe ebighị ebi.
Nzọụkwụ 1. iṅomi gị iTunes ndabere
Ma nke Wondershare Dr.Fone na Wondershare Data Recovery for iTunes ike ka ị na-agbake iPhone ebe nchekwa data si iTunes ndabere. Ọzọ, ka ego nzọụkwụ na Dr.Fone.
Mgbe launching Dr.Fone, ịgbanwee gaa na "naputa site na iTunes ndabere File", mgbe ahụ, ị ​​ga-esi na interface n'okpuru. All iTunes ndabere faịlụ gị iOS ngwaọrụ na-hụrụ na-egosipụta. Choos onye maka gị iPhone na pịa "Malite iṅomi" wepụ ọdịnaya.
Nzọụkwụ 2. Preview na-agbake iPhone ebe nchekwa data
Mgbe Doppler, ị nwere ike ịhụchalụ na agbake data ị chọrọ dị nnọọ ka ikpeazụ nzọụkwụ n'elu. Akara ha na pịa "Naghachi" zọpụta ha niile na kọmputa gị na otu Pịa.
Iji gbochie mkpa data na gị iPhone si adịkwa, ọ dị ezigbo mkpa na bara uru na-eme ka ihe ozugbo ndabere. Biko cheta na-eme ka ndabere mgbe nile.